Kooxda Barcelona oo gool madi ah kaga adkaatay Kooxda Levante balse hanatay horyaalka La Liga markoodii 26 aad +Sawiro – Gool FM
Bashiir April 27, 2019
( Spain) 27 Abriil 2019 kooxda Barcelona ayaa 1 – 0 dirtay dhigeeda Kooxda Levante kulan ka tirsanaa horyaalka dalka Spain ee La Ligao iyaga oona ku guulaysatay horyaalkeedii 26aad ahaana kii labaad oo xiriir ah.
Sidoo kale 11-kii sano ee u danbaysay sideed kamida iyagaa qaaday xili Messi oo ah mucjisada kownkan uu qaaday horyaalkiisii tobonaad.
Qeebtii koowaad ee kulan ciyaareedkii u dhexeeyey Kooxaha Barcelona iyo Levante ayaa waxa uu ku soo idlaaday bar-baro gool la’aan ah xili Barcelona aya ka wanaagsaneed dhigeeda Levante.
Barcelona ayaa abuurtay 7 jaanis oo gool loo filan karay qeebtii koowaad ee ciyaarta balse mid ka mid ah jaanisyadaas kuma guuleysan in ay gool u badalaan.
Geesta kale kooxda Levante oo marti aheyd ayaa awoodi weysay in xitaa hal isku day ay sameeyaan kulanka qeebtiisa koowaad, ugu dambeena kulanka ayaa ku dhamaaday bar-baro gool la’aan.
Waqti nasiino iyo talo soo qaadasho kaddib waxaa dib loo anba qaaday qeebtii dambee ee ciyaarta oo aheyd mid aad u xiiso badan kooxda Barcelona ayaana sii laba jibaartay dulaanada ay ku qaadeyso Kooxda Levante.
Barcelona ayaa heshay goolka koowaad ee ciyaarta waxaana u dhaliyey hogaamiyahooda Leonel Messi kaddib caawin uu ka helay Vidal daqiiqadii 62-aad ee ciyaarta.
Levante oo aan wax isku day ah sameen qeebtii koowaad ee ciyaarta ayaa la timid labo isku day oo gool loo filan karay qeebtii dambe ee ciyaarta lkn wey awoodi waayeen in ka faa’ideysataan.
Ugu dambeen kulankii xiisaha badnaa ayaa ku soo idlaaday 1-0 oo ay ku badisay Kooxda Barcelona oo ku ciyaareysay garoonkeeda, xili bartamaha todobaadkan ay garoonkeeda ku qaabileyso Kooxda Liverpool.
Kooxaha Inter Milan iyo Juventus oo isku mari waayey bar-baro +Sawiro